राष्ट्रियसभा उपनिर्वाचन : बादल र देवकोटामध्ये कुनको सम्भावना कति ?
जेठ ५, काठमाडौं । बागमती प्रदेशमा रिक्त राष्ट्रियसभा सदस्य पदका लागि भोली मतदान हुँदैन् । उपनिर्वाचनमा एमालेकै दुई नेता उम्मेदवारको रुपमा खडा भएका छन् ।
गृहमन्त्रीसमेत रहेका नेता रामबहादुर थापा बादल एमालेको आधिकारिक उम्मेदवार बनेका छन् भने एमालेकै माधवकुमार नेपाल पक्षका नेता डा. खिमलाल देवकोटा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को तर्फबाट उम्मेदवार बनेका छन् ।
बागमती प्रदेशमा एमाले एकल बहुमतमा रहेको भएपनि दुई उम्मेदवारीसँगै मत विभाजन हुने निश्चित छ । जहाँ एमालेको आधिकारिक उम्मेदवारले जित्छन् भन्ने निश्चित छैन् । माधव पक्षको प्रभाव रहेको बागमती प्रदेशमा देखिएको प्रभावलाई मतमा तान्न सकेमा गठबन्धनको तर्फबाट उम्मेदवारी दिएका देवकोटाले समेत जित्ने सम्भावना छ ।
अहिले एमालेले आफ्नो आधिकारिक उम्मेदवारलाई मतदान गर्न आव्हान गरेको छ भने माधव पक्षले भने स्वविवेक प्रयोग गर्न आव्हान गरेको छ । एमालेभित्र देखिएको विवादका कारण पार्टीको निर्देशनलाई अवज्ञा गर्ने सम्भावना बढि छ ।
कसको सम्भावना कति ?
चुनावमा दुवै उम्मेदवारले आफ्नो जित निश्चित भएको दाबी गरिरहेका छन् । पार्टी बहुमतमा रहेको कारण आधिकारिक उम्मेदवार बादलले आफुँले जित्ने निश्चित भएको बताईरहेका छन् भने बागमती प्रदेशमै रहेर लामो समय एमालेको राजनीति गरेको देवकोटाले आफ्नो पक्षमा स्वभाविक मत आउने बताईरहेका छन् ।
प्रदेशमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाले आफ्ना उम्मेदवार भएको कारण देवकोटालाई मत दिने कुरा स्वभाविक छ । माओवादी केन्द्रले यसअघि विज्ञप्ती नै सार्वजनिक गरेर देवकोटाको पक्षमा मतदान गर्न ह्वीप जारी गरेको थियो ।
बागमती प्रदेश सभामा एक सय १० र एक सय १९ स्थानीय तहका दुई सय ३८ प्रतिनिधि (प्रमुख–उपप्रमुख) मतदाता छन् । मतदातामध्ये एक प्रदेश सांसदको ४८ र स्थानीय तहका एक प्रतिनिधिको १८ मतभार हुन्छ । अर्थात् एक सय १० प्रदेश सांसदको ५ हजार दुई सय ८० र दुई सय ३८ स्थायीय प्रतिनिधिको ४ हजार २ सय ८४ गरी मतभार छ । यसरी हेर्दा प्रदेशमा ९ हजार ५ सय ६४ मतभार छ ।
प्रदेश सांसद पशुपति चौलागाईंको निधनपछि प्रदेशमा एमालेका ५६ सांसद र स्थानीय तहका एक सय ३३ जना गरी एक सय ८९ मतदाता छन् । जहाँ कुल मतभार पाँच हजार ८२ हुन्छ । प्रदेश सभामा २२ र स्थानीय तहमा ६८ जना गरी कांग्रेसका ९० जना मतदाता छन्, जसको कुल मतभार २ हजार २ सय ८० हुन्छ ।
त्यस्तै, माओवादी केन्द्रको प्रदेश सभामा २३ र स्थानीय तहमा ३३ जना गरी ५६ जना मतदाताको कुल मतभार १ हजार ६ सय ९८ हुन्छ । कांग्रेस र माओवादीको मतभार ३ हजार ९ सय ७८ छ ।
प्रदेशमा एमाले र कांग्रेस–माओवादीबीच १ हजार एक सय २ मतभारको फरक छ । यस्तोमा माधवकुमार नेपाल पक्षका १३ प्रदेश सभा सांसदले फ्लोरक्रस गरे एमालेका आधिकारिक उम्मेदवार रामबहादुर थापा बादललाई जित्न कठिन हुनसक्छ । स्थानीय तहका एक सय ३३ मतदातामा पनि माधव पक्षले आफ्नो पकड राम्रो भएको बताईरहेको छ ।
धामी घटनाबाट छानबीन गर्न गृह मन्त्रालयले बनायो समिति
१७ साउन, काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले दार्चुला घटना छानबिनका लागि…
गठबन्धन सरकारबारे ओलीको टिप्पणी : कुबाटोबाट आएको प्रतिगामी सरकार !
साउन १७, काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले…
गण्डकी प्रदेशमा थपिए ३३२ कोरोना संक्रमित, ३ जनाको मृत्यु
तीन साता नपुग्दै सत्तारुढ गठबन्धनभित्र खटपट, देउवाले एकलौटी गर्न थालेको भन्दै दलहरु असन्तुष्ट
देशैभरी थपिए २५६८ कोरोना संक्रमित, १८ जनाको मृत्यु
बैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको खोप प्रमाणिकरणमा शुल्क नलिन अनुरोध